musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » US Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kurwira dutu reHurri
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nemhepo inomhanya parizvino yakakomberedza 75mph, Henri anotarisirwa kurova Long Island kana kumaodzanyemba kweNew England neSvondo.
Tropical Dutu Henri rakakwidziridzwa kuita dutu.
Yambiro dzakanyanya dzemamiriro ekunze dzakapihwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUS.
Kunaya kwakanyanya kunotarisirwa, neNational Hurricane Center ichinyevera inosvika gumi masendimita emvura mune dzimwe nzvimbo.
Tropical Storm Henri yakagadziridzwa nhasi kuita dutu neUS National Hurricane Center. Henri akakwidziridzwa kubva padutu rinopisa kuenda kudutu Mugovera mangwanani, uye anotarisirwa kudzika musi weSvondo.
FEMA maneja Deanne Criswell
Yambiro dzakanyanya dzemamiriro ekunze dzakapihwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUS, sezvo Hurricane Henri inotevedza kuchamhembe kwakadziva kumadokero kuyambuka Atlantic.
Nemhepo inomhanya parizvino yakakomberedza 75mph, Henri anotarisirwa kurova Long Island kana kumaodzanyemba kweNew England mangwana.
Kana ikarova Long Island, ichava dutu rekutanga kurovera ipapo kubvira Gloria muna 1985. Kana ikawira pasi muNew England, ichave iri dutu rekutanga kuzviita kubvira Bob muna 1991, akauraya vanhu gumi nevashanu bhiri yemadhora anodarika 15 bhiriyoni mukukuvara.
Henri parizvino ari kuunza kumhanya kwemhepo kwakatenderedza 75mph (120kph) akananga kuUS, uye anotarisirwa kusimba painoswedera pedyo nenyika. Yambiro pamusoro pemhepo ine dutu yakapihwa kubva kuNew York kuenda kuMassachusetts. Magavhuna mumatunhu aya, pamwe neConnecticut neRhode Island, vakayambira pamusoro pekufamba kusiri madikanwa. Connecticut neMassachusetts vakasheedzawo nhengo dzeNational Guard kuti dziite basa rekugadzirira kusvika kwaHenri.
Mvura yakawanda inotarisirwa, neNational Hurricane Center nyevero yemvura inosvika pamasendimita gumi mune dzimwe nzvimbo. "Kunaya kwakanyanya kubva kuHenri kunogona kukonzera mafashama akati wandei, madhorobha, uye mafashama erwizi," iyo nzvimbo yakaraira, ichiwedzera kuti "chamupupuri kana maviri" anogona kuitika muNew England neSvondo.
New England yakatobikwa mushure memavhiki akati wandei ekunaya kwakanyanya. Federal Emergency Management Agency (FEMA) manejimendi Deanne Criswell akadaro nemugovera kuti aya mamiriro emvura anoreva kuti Henri anogona kudzura miti nemitsara yemagetsi zviri nyore, zvinogona kutungamira kumazuva ekupunzika.
"Tichaona kudzimwa kwemagetsi, tichaona miti yakadonhedzwa, uye kunyangwe dutu rapfuura, kutyisidzira kwekudonha miti nemakumbo zvichiri kunze uko," akadaro.
Uganda Airlines New Flight kuenda ku Dubai Zvakakwana Nguva ...
WHO: West Africa iri COVID-19 'kufa ...
South African Airways: Vols kubva Johannesburg kuenda ku ...
OTDYKH Expo muRussia Kubudirira Kwekusimudzira